गुल्मी जिल्लामै अक्सिजन उत्पादन सुरु - Gulminews
२०७८ मंसिर २६, १७:३९
२६ मंसिर, गुल्मी । गुल्मी जिल्लामा अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको छ । गुल्मी अस्पतालमा निर्माण भएको अक्सिजन प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन हुन थालेको हो ।
जिल्लामै अक्सिजन उत्पादन गर्ने उदेश्यले ल्याइएका सामाग्रीमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा नल्याउदा खिया लाग्न थालेका थिए । तर अहिले भने दैनिक ४० वटा अक्सिजन सिलिन्डर प्लान्टबाट उत्पादन हुन थालेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम तम्घासमा रहेको अस्पतालमा करिब डेढ करोडको लागतमा प्रतिदिन एक सय सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमताको प्लान्ट सञ्चलनमा आएको छ । कोरोना महामारीमा संक्रमितको उपचारमा अक्सिजनको अभाव जिल्लामा नहोस भनेर जिल्लाबाटै अक्सिजन उत्पादन गर्ने उदेश्यले प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडी बढाइएको थियो ।
अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न गत असारमै सामाग्रीहरु गुल्मी अस्पतालमा आएका थिए । तर अक्सिजन प्लान्ट राख्ने भवनको समयमै काम नसक्दा अक्सिजन प्लान्ट संचालनमा ढिलाई भएको थियो । जसले गर्दा सामाग्री खिया लाग्न थालेक थिए । प्राबिधिक आएर प्लान्ट निर्माण कार्य पुरा भएकाले अक्सिजन उत्पादन हुन थालेको गुल्मी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.उत्तम पच्चाले बताए ।
उनले अब आबश्यक अनुसार अक्सिजन उत्पादन कार्य अगाडी बढाइने बताए । गुल्मी अस्पतामा महामारी अबस्थामा दैनिक ठूलो अक्सिजनको सिलिन्डर १५ वटा भन्दा बढि खपत भएको डा. पच्याले बताए ।
अहिले गुल्मी अस्पतालमा दैनिक ५ वटा अक्सिजन सिलिन्डर खपत हुने गरेको छ । जिल्ला अस्पतालबाट उत्पादन गरिएको अक्सिजन अन्य सर्बसाधारणलाई पनि भर्ने व्यवस्था बारे आबश्यक छलफल पछि मात्रै निर्णय गरिने डा. पच्याको भनाई छ ।
जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सहयोग गर्नेहरुले पनि लामो समय सम्म संचालनमा आउन नसक्दाँ प्रश्न उठाएका थिए । तर ढिलो भएपनि जिल्लामै अक्सिजन उत्पदान हुनु खुसीको कुरा रहेको प्लान्ट निर्माणमा सहयोगी गुल्मी उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव ताराप्रसाद भुसालले बताए । अब गुल्मी अस्पतालमा अक्सिजन अभाव नहुने बताए । प्लान्ट निर्माणमा अभियान चलाएका नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्यालले प्लान्ट सञ्चालनमा आएसँगै गाँस काटेर गुल्मेली नागरिकहरुले उठाएको सहयोग रकमले सार्थकता पाएको बताए ।
सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै यसको निरन्तरता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको लागि नेपाल सरकारबाट एक करोड र नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा जिल्ला स्थित सामाजिक संघ संस्था व्यक्तिहरुको सहयोगमा ६० लाख संकलन गरिएको थियो ।
गुल्मी अस्पतालमा राखिएको अक्सिजन प्लान्टको १ करोड ३४ लाखको लागत रहेको डा. पच्याले बताए । गत बैशाखमा कोरोनाको दोस्रो लह्रमा अकिसजनको अभावले उपचारमा निकै समस्या झेल्नु परेको थियो । तर अब भने जिल्लामा अक्सिजन अभाव नहुने अपेक्षा लिइएको छ ।